Wararka - Xalalka qaboojinta hawada warshadaynta
Warshadu hadda maaha mid fudud oo ka mid ah qaybaha wax soo saarka iyo farsamaynta ee fikradda soo jireenka ah, laakiin waa goob dhammaystiran oo ay ka mid yihiin maamulka, R & D, wax soo saarka, kaydinta, saadka, soo dhaweynta, xafiiska, makhaayadda, saadka, baarkinka iyo meelo kale. Sidaa darteed, wareegga hawada iyo shuruudaha raaxada ayaa sarreeya, sidaas darteed warshado badan iyo aqoon-isweydaarsiyo sifeyn ayaa isticmaali doona qaboojiyaha warshadaha warshadda, si loo xalliyo dhibaatooyinkan oo loo kordhiyo waxtarka shaqada.
Deegaanka aan ku noolnahay waxaa ka buuxa boodh iyo bakteeriya. Bakteeriyadani waxay sidoo kale leeyihiin shuruudo sare oo deegaanka ah. Xarumo badan oo cilmi-baaris microbial ah, nidaamka nadiifinta ee qaboojiyaha warshadaha warshadda waxaa door biday cilmi-baarayaasha. Microorganisms-kan ayaa meel walba yaal. Waxaa laga yaabaa inaanan waxba dareemin waqtiyada caadiga ah, laakiin marka jirkeena uu cudur ama xanuun qabto, bakteeriyada hawada ku jirta waxay u badan tahay inay dilaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo badan oo lagu fulin karo oo keliya xaalad aan boodh lahayn iyo aseptic. Tusaale ahaan, mashaariicda sifaynta waxay u baahan yihiin in lagu rakibo qaboojiyaha sifaynta oo ka badan 10000 heerar.
1. Aqoon-is-weydaarsiga warshadda xalka qaboojinta dhexe: unugga centrifugal ee waxtarka sare leh + unugga gariiradda marawaxada
2. Faa'iidooyinka aqoon isweydaarsiga warshadda xal qaboojinta dhexe:
1. Maadaama ay warshaddu leedahay shuruudo sare oo loogu talagalay awoodda qaboojinta, badbaadada, isku hallaynta iyo waxtarka tamarta, waxaa lagu talinayaa in la doorto unugga centrifugal ee waxtarka sare leh ama qaboojiyaha;
2. Warshadaha waaweyn iyo aqoon-is-weydaarsiyada, awoodda qaboojinta ayaa si dhakhso ah u luminaysa, kharashkuna wuxuu ahaa mid aad u sarreeya. Waxaa lagu talinayaa in la doorto qaboojiyaha biyaha leh kharash yar oo hawlgal ah.
3. Shuruudaha lagu daboolayo xalka qaboojinta dhexe ee warshadda:
1. Cutubka centrifugal wuxuu daboolayaa dhul ballaaran wuxuuna u baahan yahay inuu diyaariyo bey'ad ballaaran oo lagu rakibo.
2. Warshadu waa inay bixisaa meel cayiman oo loogu talagalay in lagu dhejiyo armaajooyinka biyaha qaboojiyey, waana inay jirtaa meel ku filan oo dib loogu soo celin karo, iyo booska saqafka ee tuubada hawo qabow waa in la bixiyaa.
Waqtiga boostada: Agoosto-02-2021